Varotra ambongadiny isan-karazany Wholesale Tombo-kase hafanana Ho an'ny mpanamboatra kaontenera fonosana sakafo | SANXI
Bika isan-karazany ny sarony famehezana hafanana ho an'ny fitoeram-pandrefesana sakafo
Ny Heat Seal Lids dia afaka manome tombony lehibe amin'ny fanomezana sakana tanteraka amin'ny etona rano sy ny fifindran'ny oxygen, ary koa ny hazavana sy ny hanitra. Izany no mahatonga azy io ho safidy mety indrindra ho an'ny vokatra fiainana andian-tsarimihetsika marefo sy lava. Ny rakotra PET Heat Seal Lids dia safidy hafa amin'ny rakotra aluminium. Ny kalitaon'ny fanontana azo tratrarina dia avo kokoa satria fotsy ny tampon'ny plastika mamela ny kalitaon'ny sary sy ny famaritana ny loko. Rehefa PET mangarahara na mazava miaraka amin'ny lacquer misy tombo-kase no ampiasaina, dia azon'ny mpanjifa atao ny maka sary an-tsaina ny vokatra fonosana ka mahatonga azy io ho fitaovana tena be mpampiasa.
Fampidirana ny rakotra famehezana hafanana
Ny rakotra PET Heat Seal Lids dia safidy hafa amin'ny rakotra aluminium. Ny kalitaon'ny fanontana azo tratrarina dia avo kokoa satria fotsy ny tampon'ny plastika mamela ny kalitaon'ny sary sy ny famaritana ny loko. Rehefa PET mangarahara na mazava miaraka amin'ny lacquer misy tombo-kase no ampiasaina, dia azon'ny mpanjifa atao ny maka sary an-tsaina ny vokatra fonosana ka mahatonga azy io ho fitaovana tena be mpampiasa.
Endri-javatra amin'ny rakotra fanaovam-bidy
■ Fanontana vita amin'ny gravy sy ny kalitaon'ny fanontana premium, fanontana miverina misy.
■ Ireo endrika embossing isan-karazany ao anatin'izany ny grub kisoa, teboka pin, lamba rongony ary lamina manokana an'ny mpanjifa
■ Ny famaritana isan-karazany dia manome antoka ny famehezana tsara ny ankamaroan'ny akora fitoeran'ny container, ao anatin'izany ny PS, PP, PE, PET, PVC ary ABS, tinplate sy kaontenera fitaratra.
Famaritana ny rakotra famehezana hafanana
Anaran'ny vokatra Sarina savony hafanana isan-karazany ho an'ny fitoeran-tsakafo fonosana sakafo
Akora baoritra, adhesives, film, ink, solvent, sns.
Rafitra firakotra PET + PAPER + PE + FOIL + Horonantsary famehezana hafanana ho an'ny kapoaka PS / PP / PE / PET / Taratasy
Taratasy PAPER + PE + FOIL + Heat Sealing ho an'ny kapoaka PS / PP / PE / PET / Paper
PAPER + PE + FOIL + Horonantsary famehezana hafanana ho an'ny PP / PE / PET / Kaopy taratasy
Sarimihetsika PAPER + PE + Heat Sealing ho an'ny kapoaka PS / PP / PE / PET / Paper
famaritana embossed maty nanapaka tutupsworm / teboka / hazo fijaliana embossed
hateviny 30,33,38,40 micron alohan'ny embossed, 100-150 micron aorian'ny embossed
Size sy loko Azo namboarina
pirinty Rotogravure 1-10 loko, famolavolana ary logo dia omen'ny mpanjifa
savaivony 72, 73, 90,95, 97,98,100,101,102,104,112,124,130,141,181 sns. Mbola manana mihoatra ny zana-kazo 100 maty ho an'ny safidinao izahay.
Fampiasana ny rakotra famehezana hafanana
Ny Heat Seal Lids ampiasaina amin'ny famonosana kaontenera toy ny paty, chips, yogourt cookies, ronono, fromazy, gilasy, dite, cosmetic, tsiro, K-cup, sns.
Eco Friendly laminated Plastika famehezana sary mihetsika fonosana sakafo
Ny karazana sarimihetsika samy hafa dia manana firafitra samihafa. Ny fitaovana PP dia misy fahombiazana famehezana tsara, izay afaka misoroka ny fahasimban'ny tara-masoandro, ny etona amin'ny rano sy ny sisa amin'ny sakafo, ka manitatra ny fiainana talantalana amin'ny sakafo. Fa ny vidiny dia avo kokoa noho ny an'ny sarimihetsika vita amin'ny alumnique. Azonao atao ny misafidy ny vokatra arakaraka ny filanao manokana mba hampitomboana ny tombony. Ny loko, ny habe ary ny hatevin'ny horonantsary famehezana dia omena vidiny avokoa mba hanomezana izay ilain'ny mpampiasa vola manokana.
Ny orinasanay dia manome fonosana maivana ho an'ny zava-pisotro, vokatra vita amin'ny ronono, sakafo ary saha hafa. Ny horonantsary misy famehezana miaraka amin'ny fanoherana avo lenta sy rano dia afaka manaporofo ny fonosana vokatra tsy ho voarindra amin'ny fitehirizana na fitaterana. Mazava fa ny fahatsapana voalohany dia manjaka amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa. Noho izany dia mampiasa ranomainty fanonta tsy fandotoana miaraka amin'ny fametahana avo lenta izahay, izay manome mazava kokoa ny fomba fanontana. Ny vidiny mifaninana sy mirary dia afaka mampihena ny vidiny.
Teo aloha: Sarona taratasy miisa 40 micron Die-Cut Pet ho an'ny kaopy plastika famehezana
Manaraka: LOGO Voahosotra pirinty paty eo no ho eo pirinty mikatona mora foana ny triatra
Saron-kaopy vita amin'ny taratasy azo ovaina
Sarony taratasy Kraft mora vidy
Saron-taratasy azo alefa amin'ny sakafo mora vidy mora vidy ho an'ny paty eo no ho eo
Sarany mora ariana taratasy Kraft taratasy sarony
Sarony taratasy mihosotra noosina Instant namboarina
Sariny samihafa amin'ny takelaka taratasy Kraft
Sakafo ara-tsakafo azo ampiasaina amin'ny habeny Kraft Paper Paper Lid
Saron-tsakafo an-tsokosoko amin'ny sakafo an-tsokosoko
Taratasy fanodinam-bola ho an'ny sakafo an-tsokosoko ho an'ny paty
Sarony taratasy Kraft vita amin'ny sakafo azo ariana
Saron-tsakafo an-tsokosoko azo ampiasaina amin'ny sakafo
Boaty salady fihinanana sakafo an-tsokosoko azo alefa miaraka amin'ny sarony biby miady amin'ny zavona
Famonoana lovia vita amin'ny taratasy
Saron-kaopy vita amin'ny taratasy azo ariana
Sarona kapoaka taratasy azo ariana
Fanamboarana ny takelaka taratasy azo ariana
Sarony azo amin'ny kaopy vita amin'ny taratasy
Fanary fanodinam-bokatra eo no ho eo pirinty
Saron-taratasy momba ny paty noodina azo alefa indray
Kitapom-bolam-panjakana miaraka amin'ny pirinty momba ny eco-Friendly
Saron-takelaka amin'ny ravin-taratasy
Fametahana taratasy amin'ny takelaka
Taratasy taratasy apetraka amin'ny tab
Saron-taratasy amin'ny ravina
Sakafo ara-tsakafo samihafa habe Kraft taratasy
Sarony taratasy namboarina avo lenta
Sarony ambony taratasy mihosotra eo no ho eo no arosony
Sarony avo lenta amin'ny kaody paty
Sarony kapoaka taratasy mafana
Fonosana taratasy ho an'ny kaopy eo no eo
Orinasa famonosana taratasy ho an'ny kaody paty eo noho eo
Orinasa mofomamy miendrika taratasy mofomamy eo noho eo
Famolavolana fonosana taratasy ho an'ny lambam-paty eo no ho eo
Fitaovana fonosana taratasy ho an'ny takelaka noodiana Instant
Taratasy fonosana ho an'ny kaopy paty eo no ho eo
Famatsiana fonosana taratasy ho an'ny takelaka noody eo no ho eo
Ambongadiny fonosana taratasy ho an'ny kaopy paty mofomamy
Sarony fiadiana ny amboara taratasy iraisam-pirenena
Taratasy lovia taratasy miaraka amin'ny fitaovana ara-tontolo iainana
Taratasy lovia taratasy vita amin'ny taratasy
Sarom-bokotra mofomamy taratasy
Taratry ny kofehy taratasy
Mpanamboatra kaopy taratasy
Saron-kaopy misy takelaka misy rano
Kapoaka taratasy misy sarony taratasy
Sarom-bokotra mafana amin'ny lovia vita amin'ny lovia vita amin'ny rano
Takelaka taratasy ho an'ny fitoeran-tsakafo
Sarom-bokotra miantra eo noho eo amin'ny taratasy tsotra
Takelaka taratasy tsotra ho an'ny vilia baolina paty eo no ho eo
Sarony mofomamy miantra avy hatrany amin'ny takelaka vita amin'ny plastika
Fanontana tampon-taratasy lovia eo ho eo amin'ny takelaka
Fanontam-pirinty an-taratasy lovia miaraka amin'ny fitaovana fanary
Rakotra taratasy mivalona miovaova azo havaozina avo lenta
Fametahana hafanana famehezana PP ho an'ny paty paty na ...
Mikatona mandritra ny roa minitra ...
1-10 loko pirinty vita pirinty tombo-kase tombo-kase ...
Boribory / Kianja miendrika takelaka famehezana PP ho an'ny Instan ...
90mm 95mm 97mm PE rakotra tombo-kase ho an'ny paty paty ...
100-250 micron Embossed Sakafo Kilasy Noodles Sakafo ...